Ndị ahịa, ị na-eji vidiyo?
Humanize gị Brand Site Mkparịta ụka Video
Tuesday, June 12, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Vidio etolite site na itu aka na oke ahịa n'ahịa ndị ahịa na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ na-agbakwa ọsọ ọsọ iji dochie ederede ederede dị ka usoro nkwukọrịta kachasị n'ịntanetị. Nielson na-akọ na na 2011, iyi vidiyo dị elu karịa 31.5 pasent site na afọ gara aga, na-emetụ steepụ 14.5 ijeri, yana ihe karịrị ijeri vidiyo 2 kwa ụbọchị. Nke a na-eme ka vidiyo dị ka ebe nkịtị dị ka nbudata egwu, ịkekọrịta foto na email.
Nke a bụ nnukwu vidiyo sitere na ReelSEO na isiokwu:
Site na itinye ikike nke vidiyo, ụlọ ọrụ nwere ike ịkwụsị naanị ọnụ ụzọ ọ chọrọ ka onye ọbịa gaa ahịa… njikọ onwe. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka vidiyo mkparịta ụka:
Emela dee vidiyo gị. Detuo ụfọdụ ihe edeturu ma jiri igwefoto kparịta ụka. Okwesighi ka o zuo oke (ma ghara kwa izu oke).
Debe gị obere vidiyo1 ruo 3 nkeji. Gaa na isi ihe ma ọ bụ na ndị mmadụ ga-ahapụ ikiri. Ọ bụrụ na vidiyo gị na-agba ọsọ ogologo, bepụ oghere ma gbalịa ime ka clip ahụ dị ngwa. Ọtụtụ mgbe, ị nwere ike ịhapụ ntakịrị vidiyo site na ịme ya.
Nweta ụlọ ọrụ vidiyo iji rụọ ọrụ na ọkachamara intro na outro na ị nwere ike mfe mix n'ime gị video na desktọọpụ video mmepụta software dị ka iMovie or Onye na-eme ihe nkiri Windows.
Dekọọ na nkọwapụta dị elu ma jiri igwefoto vidiyo dị mma. An iPhone nwere ike ọtụtụ!
Mechie vidiyo gị n’ebughi ire site n'ịgwa ndị mmadụ etu ha ga - esi jide gị, ebe ha ga - enweta ozi ndị ọzọ, wdg. Ndị mmadụ na - ahụ mkpọsa ngwa ahịa kwa ụbọchị ma leghara ha anya… emela azụmahịa!
Wepụta oge dee a isiokwu gbara ọkpụrụkpụ maka vidiyo gị ma jiri isiokwu rụọ ọrụ nke ọma. Youtube bu igwe nyocha nke abuo!
BTW: Na Martech Zone, anyị maara na nke a bụ otu mmewere nke saịtị na-kọrọ. Anyị enwetabeghị usoro ziri ezi ugbu a hang mana kpọgidere ebe ahụ, ọ na-abịa!
Tags: video siri ikeobere videoahịa vidiyo
Ntughari uche na imeghari
Nchịkọta ahịa ndị ahịa, nyocha na mmekọrịta mmadụ na ibe ya